मानवीय सहायतामा सक्रियता देखाउँदै कांग्रेस युवा नेता शाही - नेपालबहस
मानवीय सहायतामा सक्रियता देखाउँदै कांग्रेस युवा नेता शाही
| १७:५१:०२ मा प्रकाशित
२२ भदौ, कालिकोट । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. २ निवासी धनशोभा विश्वकर्माले सेरीघाटस्थित कर्णाली राजमार्गको किनारमा झण्डै दुई गाडी गिट्टी कुटेकी छन् । उनको श्रीमान भारतमा छन् । घरमा छोरा छोरीहरु सहित ७ जनाको परिवार छ । सधै गिट्टी कुटेर भारी बोकेर कमाएको पैसाले उनको चुलो बल्थ्यो ।
तर आज भोली उनले कुटेका गिट्टी पनि बिक्रि भएका छैनन् । भारी बोक्ने काम कोरोनाका कारण बन्द भएको ६ महिना पुग्यो । घरमा चामल, दाल छैन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरु नहुँदा पेट कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ ।
लकडाउनका बेलादेखी नै छिमेकीसँग चामल मागेर सापट लिएर चुलो बल्यो । वडा कार्यालय र नगरपालिकाले वितरण गर्ने राहतमा उनको नाम समावेश भएन् । उनी लगायत खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. २ का ६० जना विपन्न परिवारहरु वडा कार्यालय र नगरपालिका घेराउ सम्म गरे । पछि राहत दिउला भनेर आश्वासन मिल्यो । तर राहत मिलेन् ।
उनीहरुले अहिले नेपाली कांग्रेसले राहत वितरण गरेको छ । चामलको बोरा लिएर घर फर्किदै गरेकी धनसोभा बिकले खुसी हुँदै भनिन्, ‘कांग्रेसले ठुलो राहत दियो ।’ स्थानिय सरकारले राहत नदिएपछि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई राहतको पहल गरिदिन आग्रह गरिएको थियो ।
सोही अनुसार कांग्रेसका युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाही, तारा शाही र पदमबहादुर शाहीले दाल, चामल, साबुन लगायतका दैनिक उपभोग्य सामानहरु किनेर गरीब दिनदुखीलाई राहत वितरण गरेका हुन् ।
यस्तै राहत पाएपछि स्थानीय बुद्धि विश्वकर्माले भने, ‘कांग्रेसका नेताहरुले राहत मात्र दिएनन् । गाँउका सबै विपन्न परिवारमा खुसी दिए ।’ यस्तै अर्का स्थानीय बालकौरा परियार भन्छन्, ‘लकडाउनपछि काम नपाएर बिजोग थियो । सरकारले निश्चित मान्छेहरुलाई खाद्यान्न दियो, हामीलाई दिएन् । छाक टार्नै समस्या भईरहेका बेला चामल पाईयो ।’
नेपाली कांग्रेसबाट २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेद्वार भुपेन्द्रजंग शाही, २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रमूखमा पराजित पदमबहादुर शाही र कांग्रेस नेतृ निर्माण व्यवसायी संघकी केन्द्रीय सदस्य तारा शाहाले व्यक्तिगत रुपमा लगानी गरी खाँडाचक्र नगरपालिका १ र २ का २ सय विपन्न परिवारहरुलाई राहत वितरण गरेका हुन् ।
कांग्रेस युवा नेता शाहीले सबै घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार प्रति परिवार २० किलो चामल, दुई किलो दाल, एक पोका तेल, मास्क लगायतका सामग्रीहरु दुई सय घरपरिवारलाई वितरण गरिएको छ । जिल्लाभरीका बाढीपीडित तथा विपन्न परिवारलाई कांग्रेसको तर्फबाट गाँउ गाँउमा राहत वितरण गर्न थालिएको युवा नेता शाहीले बताए ।
एनआरएनएकाे आठौं एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न १० घण्टा पहिले
मास्क सिलाउन व्यस्त महिला १६ घण्टा पहिले
कैदीबन्दीमा संक्रमण देखिएपछि कारागारभित्रै आइसोलेसन १ दिन पहिले
भरतपुरमा उपचाररत एक जना संक्रमितको मृत्यु २ दिन पहिले
विदेशमा अलपत्र नागरिकको निःशुल्क उद्धार गर्न आग्रह २ दिन पहिले
डीएसपीसहित ८ जना प्रहरीलाई संक्रमण २ दिन पहिले